आइसर्का एसेर पब्लिकिटो सु3पियटाफोर्मे डि कन्टेन्टी सुपिरोर? L'orientamento Da Esperto Di Semalt
यदि सामग्री मिडियामा ठूला नामहरूद्वारा प्रकाशित हुन चाहन्छ भने उनीहरूसँग प्रविष्टि रणनीति हुनुपर्दछ भन्ने गुणस्तर सामग्री हुनु भनेको एक मात्र कारक होइन। प्रतिस्पर्धा बढ्न जारी छ, विशेष गरी यदि कसैले फोर्ब्स, हफिंगटन पोष्ट, र व्यापार ईन्साइडर जस्ता फर्महरूलाई लक्षित गर्दछ भने। प्रकाशकको आवश्यकता फरक फरक भए पनि यो कडा हुँदै जान्छ।
यदि एक रणनीतिमा टाँसियो , Semalt को अग्रणी विशेषज्ञ फ्रान्क Abagnale द्वारा प्रदान, सफलता को संभावना छ।
पिचको अर्थ सबै हुन्छ
सामग्रीको ईच्छा गर्न धेरै हुन सक्छ, तर सम्पादकहरू अझै यसलाई सचेत छैनन्। यो एक आकर्षक पिचको साथ शुरू गरेर यो चित्रण गर्न लेखक माथि छ। लेखक, प्रकाशक, र उद्यमी डेभिड के। विलियम भन्छन कि पिच केवल मानकको आधारमा राम्रो हुनु हुँदैन, तर खगोलविज्ञानको कारण सम्पादकहरूले दैनिक रूपमा प्राप्त हुने थोकको कारण हो। यस्तो पिच हुनुपर्दछ:
ग्रिपिंग विषय रेखा जुन प्रकाशकको समयको १ 15-२० सेकेन्ड लाग्छ।
स्पष्ट र संक्षिप्त रूपमा लेखिएको पाठ।
एक आधिकारिक आवाज।
पिच ब्याकअप गर्न राम्रो भण्डार गरिएको ब्लग।
प्रासंगिकता र मूल्य मामला
दुई पक्ष प्रायः पाठकको आवश्यकताबाट वसन्त हुन्छन्। एक लेखकले कुनै पनि अतिथि स्थानलाई ब्रान्ड बढ्नको लागि मौकाको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ तर सामग्री प्रमोट हुँदैन। AdHere को लागि डेनियल Vaczi भन्छ कि एक व्यक्ति को पाठक को आधार मा के महत्व छ को पहिचान गर्न को लागी आफ्नो प्रकाशन अनुसन्धान गर्नुपर्छ। सम्पादकहरूसँग विकास भएको सामग्रीमा विश्वास गर्ने कारण हुनुपर्दछ। लक्षित दर्शकहरूको बारेमा सिकेर, यो प्रवृत्तिको बराबर रहन र तिनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत गर्न जारी राख्दछ।
१. हफिंगटन पोष्टमा परिवर्तनहरू
प्रकाशनले अतिथि ब्ल्गरहरूलाई मनपराउँदछ, तर यसले अक्टूबर २०१ in मा नयाँ योगदानकर्ताहरूको लागि यसको विन्डो बन्द गर्‍यो। क्याथरिन अल्फोर्ड, नियमित योगदानकर्ता, क्यारफुल सेन्ट्सलाई उपलब्ध गराउनुको कारण प्लेटफर्ममा सामग्रीको बाढी आएकोले यसले मानिसहरूलाई अपलोड गर्ने अनुमति दिएको थियो र तिनीहरूको सामग्री तुरुन्तै देखा पर्दछ। यसको मतलब यो होइन कि लेखकहरूले अतिथि पोष्ट ल्याउन सक्दैन किनकि यो केवल अनिश्चितकालीन रोकिने अवस्थामा छ। सम्भाव्य योगदानकर्ताहरूले अब घर पिच फारम प्रयोग गर्नका लागि सहारा लिनु पर्छ।
२. फोर्ब्स प्रशंसित लेखकहरूलाई मन पराउँछन्
फोर्ब्स प्रायः लेखकहरू लिन्छन् जसले पहिले सामग्री प्रकाशित गरेका थिए। फोर्ब्सका नियमित योगदानकर्ता, जोन स्टीमले दाबी गरे कि प्रकाशनले ट्र्याक रेकर्ड भएका व्यक्तिहरूलाई मान्यता दिन्छ र कम्तिमा हरेक हप्ता लेख लेख्न प्रतिबद्ध गर्न सक्छ। एक फोर्ब्स सम्पर्क गर्न को लागी सामाजिक मिडिया वा ईमेल को उपयोग गर्न सक्दछ। यो प्रकाशनसँग सम्बन्ध सिर्जना गर्ने एउटा तरिका हो, जुन यसले कसरी संचालन गर्छ, र कसरी आकर्षक पिच तयार गर्ने बारेमा जान्ने मौका प्रदान गर्दछ।
यदि कोही उनीहरूको पिचसँग सन्तुष्ट छन् भने, फोर्ब्सले तिनीहरूलाई विचार@forbes.com मार्फत ईमेल गर्न आग्रह गर्दछ।
Business. व्यवसाय ईन्साइडर उच्चतम गुणवत्ता चाहन्छ
Million० मिलियन भन्दा बढी पाठकहरूको साथ, प्रकाशनले लेखकका लागि उत्कृष्ट श्रोता प्रस्ताव गर्दछ र यसको बदलामा विशेषज्ञता चाहिन्छ। टेलर लोरेन्ज भन्छन् कि प्रायः BI योगदानकर्ताहरू विभिन्न उद्योगका विशेषज्ञहरू हुन्। BI ले सम्भावित योगदानकर्ताहरूलाई अवस्थित सामग्री मार्फत जानका लागि सम्पादकहरूले अपेक्षा गरेको कुरा थाहा पाउन, पिच प्रदान गर्नु अघि।
यो व्यावसाय ईन्साइडरमा प्रकाशित "एक-अफ" प्राप्त गर्न धेरै धेरै सम्भव छ। तिनीहरू पनि ब्लगमा पहिले नै मौलिक सामग्री स्वीकार गर्दछन् लेखकहरू यसमा अधिकार छ। योगदानकर्ताहरू पिच योगदानका लागि योगदानकर्ताहरू @businessinsider.com जबकि प्रमाणपत्रहरू, पोष्ट कोटी, र पहिले प्रकाशित सामग्रीको लिंक प्रदान गर्दा।
प्रमुख सामग्रीको लागि एक्सपोजर पाउन धेरै काम चाहिन्छ। यस्तो समय हुन्छ जब मानिसहरू भाग्यमा पर्छन् र ठूला प्रकाशकहरूको लागि काम गर्छन्। जबकि, सडक अरूको लागि लामो भएता पनि, अन्तमा परिणामहरू प्रत्येक प्रयासको लायक हुन्छन्। एक ब्ल्ग निर्माण गरेर र एक ब्रान्डको विकास गरेर, र परिणाम स्वरूप प्रत्येक सम्पादकको पिच चरणहरू अनुसरण गर्दा, यो उद्देश्य प्राप्त गर्न बढी सम्भव हुन्छ।